बिनालाई ‘बिगार्ने’ को–को हुन् ? यस्तो छ भित्री रहस्य — sancharkendra.com
बिनालाई ‘बिगार्ने’ को–को हुन् ? यस्तो छ भित्री रहस्य
काठमाडौं । राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवारसँग जोडिएका कारण ठूलो मौका पाएको भनी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्री बिना मगरको यत्तिकै आलोचना भएको थियो । कतिपयले साधारण विषयमा पनि मगरलाई जोडेर टिकाटिप्पणी गर्दै आएका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
सबैभन्दा बढीचाहिँ मेलम्ची प्रकरणमा मन्त्री मगरको आलोचना भयो । पहिलो पटक मन्त्री बनेकी उनको कार्यकालका सुरुका दिनमा कर्मचारी र पछिल्ला दिनमा उनका सल्लाहकार बनेका तीन जनाको समूहका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।
खासगरी उनका स्वकीय सचिव विजय भट्टराई, पूर्व वाइसीएल नेता भाइकाजी घिमिरे र सुनिल दाहालको लहलहैमा मन्त्री मगरले निर्णय लिन थालेको स्रोतले बताएको छ । यी तीनजनासँग जोडेर मन्त्री मगरलाई बदनाम गराइएको छ ।
उनीहरूको सल्लाह बमोजिम नै मन्त्रालयका प्रशासनदेखि अनेक विभाग चलाउन थालेपछि मन्त्री मगरको आलोचना बढेको हो । तर, उनले प्रशासन चलाउने काममा कर्मचारीको असहयोग रहँदै आएको बताएकी छन् ।
करिअरको सुरुआतमा नै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विषयमा उनलाई बोल्न र निर्णय गराउनका लागि सल्लाहकार समूहले दिएको सुझाव गलत भएको उनका शुभेच्छुकहरू बताउँछन् । ति मध्येका एक जनाले भने,‘मन्त्रीले मान्छे चिनेर निर्णय गर्ने भन्दा पनि सीमित घेरामा रहेर निर्णय गर्न थाल्नु भयो । एक त पारिवारिक सम्बन्धका कारण उहाँ आलोचना सहन बाध्य हुनुहुन्थ्यो, अर्को कतिपय निर्णय सफल हुन सकेनन् ।’
यहि बीचमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनको कामका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी पुगेपछि मन्त्री मगरले निकालेको विज्ञप्तिको पनि आलोचना भयो । ‘जुन विषयमा बोल्नु नै नहुने थियो, जनताको प्रश्न उठेको विषयमा आफ्नो राजनीतिक विषय जोडेर कडा विज्ञप्ति निकाल्नु पनि गलत हुन गयो’, उनका सहयोगीहरू नै भन्छन्,‘यस्ता विषयले हानि गर्छ । गरिरहेको छ ।’
नीहित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिको घेराबन्दीमा परेका कारण मन्त्री मगर हरेक प्रकरणमा विवादमा तानिने गरेकी छन् । त्यहि समूहको सल्लाहका आधारमा अगाडी बढ्दा मेलम्ची प्रकरणको अख्तियारमा उजुरी काण्डमा उनले विज्ञप्ति निकाल्न परेको थियो । जसको कडा आलोचना पनि भयो । सर्वसाधारणले त उनको विज्ञप्तिमाथि खरो टिप्पणी नै गरेका थिए ।
स्रोतले भन्यो,‘राजनीतिमा जोसँग शक्ति छ त्यसको पछाडी दौडनेले मुनाफा मात्र हेर्छ । तर, मन्त्री मगरसँग राजनीतिक जीवनको महत्व पनि जोडिएको छ । अनेक स्वार्थलाई उहाँले ध्यान दिनुपथ्र्यो त्यसमा कमजोरी भएको देखिन्छ ।’
मन्त्री मगरलाई पहिलो घेरामा सल्लाह नदिने उनको निकटका अन्य सहयोगी भने हितकर व्यवाहार नै गर्छन् । अझै पनि मन्त्री मगरले आफ्ना घोषणालगायतका विषयलाई सकार्ने ठाउँ रहेको उनीहरूको सुझाव छ ।
त्यसो त बाहलवाला सचिवले उनको मन्त्रालयबाट सरुवा हुँदा पत्रकारसँग नै मन्त्रीको बदनामी नगरेका होइनन् । सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई मेलम्ची प्रकरणका कारण नै सरुवा गरिएको थियो ।
तर, उनले मिडियामा मन्त्रीले मुलुक डुबाउन लागेको भनी बयान दिए । अर्कातिर, सोही मन्त्रालयमा रहेका एक जना सहसचिवले मन्त्री र सचिव मिलेर मनोपोली भ्रष्टाचार गरेको बयान दिएका थिए । जसका कारण मन्त्री मगरलाई अप्ठेरो माथि अप्ठेरो थपिँदै गएको थियो ।